Red Lobster locations in Arizona: benefits of honey cinnamon
benefits of honey cinnamon N'ime otu puku afọ , mmanụ aṅụ na- mara ẹwụt ijuanya na -agwọ ọrịa ike . Mmanụ aṅụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ike ụzọ iji chebe gị idem. Ya ike mgbochi nje ma na-agwọ Njirimara -eme ka ọ na akwa eke usọbọ ọtụtụ ndị nkịtị ike nsogbu.
Aṅụ ilo , gbara na regurgitate nectar ka mmanụ aṅụ ; a nectar dere fọrọ nke nta ka 600 ogige . Mgbe mmanụ aṅụ aṅụ -akpọkọta ndị ha nectar ha Itinye enzyme a na-akpọ glucose oxidase ya dị ka ụzọ iji chebe ndị na mmanụ aṅụ . Polyflora honeys na- mere si nectar si dị iche iche okooko osisi , mgbe blended honeys si dị iche iche chịrị ahọrọ iji nweta ihe a kapịrị ọnụ uto .
Mmanụ aṅụ nwere ihe ọhụrụ chemical mejupụtara , otu onye na-eme ka ọ na- mgbe ebighị ebi na-enweghị kwụsị . Mmanụ aṅụ na ndammana dere 18 amino asịd , tinyere obere a na ọtụtụ vitamin na mineral . Mmanụ aṅụ na- abụghị nanị na ọ dị mma maka ahụ ike , ma ọ bụ dị ukwuu n'ihi na akpụkpọ gị ka mma. Lee ike uru nke eke mmanụ aṅụ ga- ozokwa mụbaa ihe mmasị maka nke a ụtọ nectar .
Gbochie cancer na ọrịa obi na ọrịa
Mmanụ aṅụ na e dere Nwere Ifuru flavonoids ( bioflavonoids ) ọzọ akpọkarị antioxidants n'ezie counteract free radikal ọrụ . Na-eri nri na mmanụ aṅụ nwere ike belata ihe ize ndụ ndị ọrịa obi na ọrịa igbochi ọrịa kansa.
Mmanụ aṅụ na- adịghị ejikari a probiotic umi , ma, o nwere ike ije ozi dị ka a prebiotic . Kọọrọ dọkịta gị tupu ewe ọ bụla nri prebiotic nzube iji jide n'aka na ọ bụ ihe nchekwa gị.
mara mma anụ
Mmanụ aṅụ na- aka chebe gị anụ si emerụ UV ụzarị na ikwado ikpa nwere ikike rejuvenate . Mmanụ aṅụ na- eme ihe dị ka agreat mgbochi ịka nká gị n'ụlọnga na moisturizer .
Dịkwuo ịgba ọsọ na arụmọrụ
Mmanụ aṅụ na -anapụta a dị ịrịba arụmọrụ agbam ume ka agba ndi egwuregwu n'oge ikike ihe omumu .
Belata ụkwara na akpịrị iyatesịt
Mmanụ aṅụ a mara dajụọ mmụọ ahụ mgbakasị akpịrị linings ma belata ụkwara. A ọmụmụ ke Penn State n'Ụlọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọgwụ na ụmụ n'elu afọ afọ abụọ gosiri na mmanụ aṅụ na- aka ha ụkwara obere ma na-ehi ụra ka mma.
Belata ọnya ndị ọzọ na -anaghị ekwe eriri afọ
Mmanụ aṅụ na combats ọtụtụ eriri afọ ọrịa na ọrụ dị ka onye dị ike probiotic n'ime Gi tract .
Mgbochi nje , mgbochi fungal
Mmanụ aṅụ bụ antiseptik , ude , antifungal , na antibacterial - ya mgbe mbụme ! Kasị ike mgbochi nje Njirimara nke ọ bụla na mmanụ aṅụ na ụwa nwere ike iji na-emeso ude na-eguzogide nje na-efe efe .
Enwe na 5 ọcha
Mmanụ aṅụ na- atụle na-emetụta ihe nile atọ ahụ ji oge ochie ihe onwunwe imbalances ghaghị . Ọ bụ kwukwara ka bara uru ọ bara uru melite ụzọ , arọ akakpa, urinary tract ọrịa , bronchial ụkwara ume ọkụ , afọ ọsịsa , na ọgbụgbọ.
Ọbara sugar iwu
Na-eme nchọpụta na-eche na ọ bara uru dị na mmanụ aṅụ na -enwe agụụ homonụ na ọbara sugar etoju ike nyere aka gbochie iji aro isi rite uru.
Ịgwọ ọnyá na Burns
Mmanụ aṅụ na e ji mee ihe ebe ọ bụ na n'oge ochie, dị ka a usọbọ ke ọnya na-elekọta . Ihe Na-egosi na anumanu ọmụmụ ụfọdụ ọnwụnwa ka aro na mmanụ aṅụ nwere ike mee ngwangwa ọnya na-agwọ ọrịa .
Mmanụ aṅụ na lemon nakwa ihe ọma n'ihi oyi na ụkwara. Anyị nwere ike iji mmanụ aṅụ na-enweghị ihe ọ bụla dị n'akụkụ mmetụta . Ma, enyela mmanụ aṅụ ka ụmụ n'okpuru otu afọ nke ọgbọ dị ka o nwere ndi nwere iji mee ka nwa botulism .
Diposting oleh Lisa Fernandez di 23.41